FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY ALIKA FOTSY ANGLISY ANGLISY - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny alika fotsy anglisy anglisy
Bulldog English English White, sary natolotry ny The White English Bulldog Preservation Society
Ny White English Bulldog (WEB) dia alika antonony sy malaky malemy mijoro amin'ny tongony antonony nefa matanjaka amin'ny taolana antonony. Ny hatoka dia tokony ho mafy soroka tokony hozatra tsara sy voafaritra tsara. Ny kiho dia tokony hifanaraka amin'ny soroka sy ny tongotr'ilay alika. Ny hozatra dia tsy dia matevina na mibontsina mba ahafahana mivezivezy, mailaka ary maharitra. Mafy ny palitao misy volom-borona kely eo an-damosin'ny tongony aoriana. Ny lokon'ny palitao dia misy fotsy, misy loko tsy misy patsy, aloky ny volontsôkôlà mena, ny aloky ny brindle rehetra dia tsy mandrakotra mihoatra ny 25% amin'ny vatana. Ny pigmentation sy ny tasy mainty ihany no hita amin'ny hoditra, manodidina ny maso, amin'ny orona sy molotra ary ny taovam-pananahana. Ny loha dia toradroa misy fijanonana mahamarika na antonony. Ny arches supra-orbital dia tononina amin'ny tendrony afovoany eo anelanelan'ny maso ka hatramin'ny aorian'ny loha. Kianja mivelatra sy malalaka, biriky antsasaky ny 2 1/2 'hatramin'ny 3 1/2'. Manaikitra: hety, hety miverina mankany 1 'ambanin'ny be indrindra. Mihodina na mipetaka ny sofina. Ny maso dia mety ho aloky ny volontany, amber okay manga dia heverina ho lesoka amin'ny karazany. Ny tongotra dia boribory sy matevina miaraka amina tranonkala eo am-pelatanana. Rehefa tsy raikitra ny rambony dia matevina amin'ny fotony ary misy volom-borona amin'ny farany.
The White English Bulldog dia alika mpiaro ny biby sy ny fiompiana. Izy io dia mpanara-maso sy retriever an'ny biby fiompy mafy indrindra, na dia amin'ny tany mando aza. Izy io dia ampy amin'ny maha-mpihaza manodidina azy rehetra manomboka amin'ny hazondamosin-kazo mankany amin'ny orsa. Karazan-jaza antitra sy tsy dia fahita firy amin'ny endriny tena izy, ny WEB dia alika mpanelanelana amin'ny alika lehibe alain'ny toeram-piompiana sy alika mpiompy manodidina, indrindra ho fiarovana izany. Izy io dia tsy mivadika ary miaro mafy ny tompony, ny fianakavian'ny tompony, ny fananany, ny biby fiompiny ary indrindra ny ankizy. Toy ny alika rehetra, alao antoka fa marina ity alika ity mpitarika fonosana , ary hanaiky ny mpitantana azy io. Ny WEB dia tsy noheverina ho alika mihaza, na dia ampy tsara aza izy io.
Haavony: Vehivavy 20 - 24 santimetatra (51 - 70 cm) Lehilahy 21 - 25 santimetatra (53 - 63 cm)
Milanja: Vehivavy: 55 - 85 pounds (25 - 39 kg) Lehilahy 65 - 110 pounds (29,5 - 50 kg)
Ny olan'ny fahasalamana dia vitsy dia vitsy rehefa mitombo araka ny tokony ho izy sy marina amin'ny fiaviany sy ny fampiasana azy.
afangaro laboratoara alika omby aostraliana
Ny fari-piainana dia faritana ho an'ireo alika fiompiana: faritra midadasika sy malalaka malalaka. Ny ankamaroany dia tsy manao tsara any amin'ny kennel na ao an-trano. Ireto alika ireto dia mila miasa sy manao ny asany. Ny tsy famelana azy ireo hanao izany dia mety hiteraka fitondran-tena manimba sy / na tsy fahombiazana mivoatra izay mety hitarika ho amin'ny fahafatesan'ny alika.
Mila asa hatao. Raha eo anelanelan'ny asa ny alika, ohatra, eo anelanelan'ny vanim-potoanan'ny fihazana dia mila alaina farafaharatsiny a dia an-tongotra lavitra isan'andro.
10-16 taona eo ho eo
shar pei bulldog afangaro alika kely
Ny fiaviany dia atsimon'i Georgia sy avaratry Florida mandritra ny taonjato faha-16 sy faha-17.
WEBPS = Fikambanan'ny Fikolokoloana Bulldog anglisy fotsy
'Jack the White English Bulldog sy ny sakaizany kely, Nicholas — Alika miasa any an-toerana i Jack izay adidiny ny miambina ny trano, ny fianakaviana, ny biby fiompy, manasaraka ary mamindra omby sy kisoa ary mitazona azy ireo rehefa ilaina izany. Rehefa tsy miasa ny tahiry dia alika mpiambina maharitra sy mpiara-milalao izy. Miasa eo akaikin'ny tohodrano i Jack amin'ny asany. '
'Lane's Otis, Mary ary Diamond miambina osy: ny WEB dia ekipa manao ekipa, nefa afaka miasa irery.'
'WEB lahy lehibe sy vehivavy lehibe roa, ny iray amin'ireo dia reny mampinono, mijoro avelany hiditra ao am-penina alika ny tompony - nilazana fotsiny izy ireo fa mijanona ary tsy mila teren'ny heriny. Mariho fa ny alika reny dia mijery ny tompony raha mila torolàlana fanampiny. '
'Lane's Patchee manamarina ny kisoa - manamarika fa tsy mampiseho herisetra na famantarana famantarana fiara mihaza mankany amin'ny kisoa izy. Miarahaba azy izy. '
'Lehilahy lehibe roa sy WEB vehivavy lehibe iray dia miara-miasa amin'ny familiana manodidina ilay trano amin'ny asany miambina.'
kilalao / mpiandry ondry aostraliana kely
cairn terrier chihuahua afangaro alika kely
mpiandry ondry antsasaky ny chow